Pepephone na-enye gị megabytes abụọ na fiber optics maka euro 29 | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Noticias, Ndị ọrụ ekwentị
Ekpuwere Pepephone dị ka otu n'ime ndị ọrụ kachasị ewu ewu na Spain. Widedị ọnụego ya dịgasị iche, maka ekwentị mkpanaaka na atntanetị n'ụlọ, yana ọnụ ala dị ala bụ isi ihe abụọ maka ihe ịga nke ọma a. Na onye ọrụ ugbu a na-ewetara ndị ọrụ nwere mmasị na fiber optic ozi ọma, n'ihi mgbanwe ọhụrụ a.
Ebe ọ bụ na Pepephone ga-enye ndị ọrụ okpukpu abụọ megabytes ahụ. Ka ha wee nwee ike ịnyagharị na ọsọ ọsọ dị elu site n'ụlọ na nkasi obi zuru ezu. Otu ihe ọzọ na-egosi na ihe ịga nke ọma nke onye ọrụ a na Spain.
Nke a abụghị nkwalite. Ebe ọ bụ na anyị na-eche mgbanwe na-adịgide adịgide ihu, nke onye ọrụ na-ewebata ndị ọrụ kemgbe mmalite nke ọnwa a. O nwere ike ịbụ na gị na ndị butere eriri optic achọpụtala ya. Megabytes abụọ maka otu ọnụahịa ahụ.
Pepephone na-abawanye megabytes nke ọnụego ahụ ugbu a. Yabụ, ị ga-enwe 200 Mb symmetric. Nke a pụtara na ọsọ bulite na ọsọ a ga-ebudata ga-abụ 200 Mb. Ekele dịrị nke a, ị ga-enwe ike ịnyagharịa ọsọsọ karịa otu ị na-eme ugbua.
Mgbanwe na-adịgide adịgide, dị ka anyị gwara gị. All nke a na-enweghị modifying kwa ọnwa price nke a ngwa anya eriri. Will ga-anọgide na-akwụ ụgwọ euro 29 kwa ọnwa. Ya mere, ị na-ewerekwu megs n’akwụghị ụgwọ ọzọ. Ezigbo ohere ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịgbanwee gaa na onye ọrụ ọhụụ. Pepephone na-eme ka ọ dịrị gị mfe ugbu a.
Naanị ihe ị ga - eme ka ị nwee ike ibunye eriri ngwa a site na Pepephone bụ tinye njikọ ndị a. Ebe ị ga-niile nzọụkwụ i nwere na-eso na-ọnụego a. Ma yabụ, nwee ọfụma njikọ ka mma, na ọnụ ahịa kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị ọrụ ekwentị » Pepephone's fiber na-enye gị okpukpu abụọ Mb
Gmail maka gam akporo na-ahapụ gị ịmeghe ozi ị zitere